Noocyadeenna - Xuzhou Bonovo Makiinado & Qalab
Xuzhou Bonovo Makiinado & Qalab waxay ku taalaa magaalada Xuzhou, saldhiga wax soo saar ee ugu weyn & dhisme mashiinada wax soo saarka ee Shiinaha, halkaas oo noocyo badan oo adduunka caan ka ah sida Caterpillar, Volvo, John Deere, Hyundai iyo XCMG ay maalgashi ku sameeyeen oo ay ka dhisteen warshadooda warshadooda halkan.
Iyada oo leh tikniyoolajiyad wax soo saar casri ah iyo faa'iidooyinka qeybaha warshadaha, Bonovo waxay soo saartay 3 qaybo ganacsi oo waaweyn (Bonovo Attachments, Bonovo Undercarriage Parts and DigDog) iyo kooxda Bonovo waxay had iyo jeer awood u leedahay inay ku siiso dhammaan noocyada alaabada mashiinada tayada leh iyadoon loo eegin inaad tahay milkiileyaal magac leh, ganacsatada ama isticmaalayaasha dhamaadka.
Lifaaqyada Bonovo waxay u heellan yihiin inay ka caawiyaan macaamiisha inay helaan wax-soo-saar badan iyo wax-soo-saar iyada oo loo marayo bixinta lifaaqyo tayo sare leh illaa 1998s. Astaantu waxay caan ku tahay soo saarista baaldiyo tayo sare leh, lammaaneyaal dhaqso badan, grapples, cudud & gacan, pulverizers, rippers, thumbs, rakes, breakers and compactors for all types of excavators, skid steer loader, wheel loaders and bulldozers.
Qaybaha Gawaarida Gawaarida ee Bonovo waxay bixiyeen qaybo badan oo ka mid ah dharka hoosta lagu xidho ee qodista iyo dozers-ka. Waxaan fahamsanahay isku-dhafka kaamil ah ee birta tayada sare leh iyo tikniyoolajiyadda kuleylka ee horumarsan ay yihiin waxyaabaha muhiimka ah ee ka dambeeya guusha sumadda BONOVO. Qaybahayaga hoose ee gawaarida waxaa lagu dhisay tayo wanaagsan, kalsooni iyo dammaanad dheeri ah oo aad si buuxda ugu kalsoonaan karto. Bakhaarka 70,000sqf had iyo jeer wuu buuxin karaa gaarsiintaada degdegga ah, iyo R&D xoog leh iyo sidoo kale inta badan kooxda iibinta xirfadleyda ah ayaa runtii hubaal ka dhergi kara wax kasta oo shuruudahaaga habayn ah si dhakhso leh.
DigDog waa sumad cusub oo qoys oo ka tirsan kooxda Bonovo ilaa 2018. Sheekadeeda sumadeed waxay soo bilaabatay 1980-meeyadii markii loo adeegsaday sumcad baaldi oo caan ah oo ku taal koonfurta Afrika. Bonovo waxay dhaxashay sumcaddan quruxda badan, xuquuqdeeda diiwaangelinta iyo domain rasmi ahaan 3 sano ka dib markii ay musalafday. Dhowr sano ka dib shaqo adag iyo khibrad soo saarista warshadeed, DigDog waxay noqotay sumcad lagu ixtiraamo qodayaasha yaryar iyo kuwa xamuulka qaada. Labadeenaba waxaan aaminsanahay in "Eey runtii ka awood badan yahay qodista bisad". Hadafkeenu waa inaan DigDog ka dhigno sumcad caan ah oo qodayaal yaryar oo si hufan uga shaqeeya deyrkaaga halheyskeenuna waa: "DigDog, qodaalkaaga daacadda ah!"